အမျိုးအစား: app ကို
Orweb: proxy + သီးသန့်လုံခြုံရေး Browser ကို v0.2.2 – APK ကို Download လုပ်ပါ
အန်းဒရွိုက်, apk, app ကို, လြှောကျလှာ, ဆက်သွယ်ရေး, လူကြိုက်များသော Apps ကပ
Orweb Download: proxy + သီးသန့်လုံခြုံရေး Browser ကို v0.2.2 APK ကိုဖျေါပွခကျြ Orweb proxies.NOTICE ကိုကူညီမယ့်ပုဂ္ဂလိကတိုးမြှင့်ပိုက်ကွန်ကို browser ကိုဖြစ်ပါတယ်: ဒီ app ကိုပထမဦးဆုံးဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် Orbot ကိုသက်ဝင်စေရန်သင့်အားလိုအပ်ပါတယ်: အန်းဒရွိုက် app ကိုအပေါ်ကို Tor. ပထမဦးဆုံးအကြောင်းကို set up ကို ကျေးဇူးပြု.: https://market.android.com/details?အဆိုပါ Orbot ကို app ကိုအတူသုံးတဲ့အခါ id = org.torproject.android, ဒီအသားတင် browser ကိုပေးသည်…
Zirco Browser ကို v0.4.3 – APK ကို Download လုပ်ပါ
Download Zirco Browser ကို v0.4.3 APK ကိုဖျေါပွခကျြ Zirco Android အတွက် open-ထောက်ပံ့ရေး browser ကိုဖြစ်ပါတယ်. options ကို:– အဆမဲ့ tabs များ (လက်ဝဲ / သငျ့လျြောသောပွတ်ဆွဲခြင်းဖြင့်လဲလှယ်);– ကြော်ငြာ-blocker (http ကြည့်ရှုပါ://အပိုသတင်းအချက်အလက်နှင့်ကန့်သတ်မှုအဘို့အ goo.gl/MK2Kd);– SD ကဒ် / အန်းဒရွိုက်ဘရောက်ဇာကို bookmarks ကိုမှ / ထံမှသွင်းကုန် / ပို့ကုန်;– url bar ထဲကနေရှာရန်;– plugins တွေကိုအကူအညီတောင်း (Flash ကို);– Firefox ကို Sync ကိုထံမှ bookmarks ကို retrieve နိုင်သလား;– … …
တိုက်ရိုက်တီဗီ (Flash ကို) v2.7 – APK ကို Download လုပ်ပါ
အန်းဒရွိုက်, apk, app ကို, လြှောကျလှာ, လူကြိုက်များသော Apps ကပ
တိုက်ရိုက်တီဗီများအတွက်ဖော်ပြချက် (Flash ကို) v2.7 – အဆိုပါလျှောက်ထားအန်းဒရွိုက် Honeycomb three.1 နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့မဟုတ်ဘူး APK ကို Download လုပ်ပါ. ငါကအပေါ်အလုပ်မလုပ်. အခမဲ့အဘို့အဥရောပတီဗီလိုင်းများ Watch. အဆိုပါလျှောက်ထား Flash ကိုပါဝင်သူလိုအပ်ပါတယ်. Adobe နေဖြင့်လိုင်စင် gadget တွေရဲ့စစ်ဆေးရမည့်စာရင်း: http://တိုက်ရိုက်တီဗီ Download www.adobe.com/flashplatform/certified_devices/ (Flash ကို) v2.7 APK ကို Menu ကို…
Google Maps ကို v6.0.3 – APK ကို Download လုပ်ပါ
အန်းဒရွိုက်, apk, app ကို, လြှောကျလှာ, google, လူကြိုက်များသော Apps ကပ
Google Maps ကို v6.0.3 APK ကိုဖျေါပွခကျြကို Google Maps ၏နောက်ဆုံးပေါ်ပစ်လွှတ် Download Download, နှင့်မျှမတို့ဖွငျ့တခါပိုပြီးစက္ကူမြေပုံသယ်ဆောင်. Navigation နှင့်အတူ Google Maps ကို Get (beta ကို), တည်နေရာများ, နှင့်လတ္တီတွဒ် * Navigation: အခမဲ့, အသံပဲ့ထိန်း GPS စနစ် navigation system ကို * တည်နေရာများ: ရှာဖှေတှေ့, ကြေး, နှင့်တည်နေရာအဘို့အကြံပြုချက်များ * လတ္တီတွဒ်ရ: အပေါ်သူငယ်ချင်းများကိုကြည့်ပါ…
Market က v3.4.4 – APK ကို Download လုပ်ပါ
Market က v3.4.4 APK ကိုဖျေါပွခကျြအက default ကို Android Market က utility ကို Download လုပ်ပါ. သင့်ရဲ့တယ်လီဖုန်းနှင့်အတူဤနေရာတွင်တယ်သောအရာရှိတဦးက Android Market ကနေဒေါင်းလုပ်ရည်ရွယ်ချက်များ.
Facebook မှာ Messenger ကို v1.5.005 – APK ကို Download လုပ်ပါ
မက်ဆေ့ခ်ျကိုတစ်မြန်မဟာဗျူဟာရဲ့ Facebook Messenger ကို v1.5.005 APK ကိုဖျေါပွခကျြက Facebook Messenger ကို Download လုပ်ပါ. Facebook မှာ Messenger ကိုလုပ်သူများဆဲလ်မက်ဆေ့ခ်ျများတင်ပို့ဖို့မြန်မဟာဗျူဟာဖြစ်ပါတယ်. Messenger ကိုနှင့်အတူ, သင်သည်သင်၏အတွက်ကမ္ဘာလုံးသို့မဟုတ်ဘယ်သူ့ကိုမှန်းကျင်ကသင့်အိမ်ထောင်ဖက်မဆိုအတူမက်ဆေ့ခ်ျများတင်ပို့ခြင်းနှင့်ရယူပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်…
Moviefone – ရုပ်ရှင်တွေ & ပြသချိန်များ v1.8.43.2 – APK ကို Download လုပ်ပါ
အန်းဒရွိုက်, apk, app ကို, လြှောကျလှာ, Entertainment က, လူကြိုက်များသော Apps ကပ
Moviefone Download – ရုပ်ရှင်တွေ & ပြသချိန်များ APK ကိုဖျေါပွခကျြ Moviefone Android ပေါ်မှာယခု v1.eight.43.2. ရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်နှင့်ပြသချိန်များရှာဖွေတွေ့ရှိ. ငါတို့သည်စကားပြောကြအဖြစ် Download! မတ်ေတာသရုပ်ရှင်? ရုပ်ရှင်ပြသချိန်ရှာဖွေနေ? Moviefone သင်တို့အဘို့ဖြစ်ပါသည်. သငျသညျနီးစပ်, Movies များနှင့်ပြသချိန်များရှာဖွေတွေ့ရှိ, အမြင်ရုပ်ရှင်အမြည်းများနှင့်ရုပ်ရှင်ဒေတာအရ. တတ်နိုင်…
ရွှင်လန်း Paint – Movie, သင့်ရဲ့ Drawing v1.9.1 – APK ကို Download လုပ်ပါ
အန်းဒရွိုက်, apk, app ကို, လြှောကျလှာ, မတော်တဆဖြစ်သော, လူကြိုက်များသော Apps ကပ
ဒေါင်းလုပ် Paint ရွှင်လန်း – Movie, သင့်ရဲ့ Drawing v1.9.1 APK ကိုဖျေါပွခကျြ Paint ရွှင်လန်းနှင့်သင်၏အနုပညာ Free! —- ရွှင်လန်း Paint —- အများအပြားစုတ်တံနဲ့အတူလက်ညှိုးထိုးခြင်းဖြင့် Doodle ဆွဲ. အတူရုပ်ရှင်နဲ့တူဆွဲနောက်တဖန် Play “MOVIE” mode ကို, အခြားသူများနှင့်သင့်ရဲ့ပျော်စရာဝေမျှဖို့ option ကို. ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်…
စက္ကူ Toss v1.0.9 – APK ကို Download လုပ်ပါ
အဆိုပါ hit အားကစားနောက်ဆုံး Android အတွက်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါသည်စက္ကူ Toss v1.0.9 APK ကိုဖျေါပွခကျြ Download! သငျသညျအစဉျအမွဲအစဉ်အဆက်အလုပ်မှာပျင်းပြီ, စက္ကူတစ်ဦးအတုံးတက်ကြေနှငျ့သငျလည်းသေးငယ်တဲ့အမှိုက်လုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်အခါသမယ၏အဘယ်အရာကိုအရေအတွက်ကိုရေတွက်? အစဉ်အဆက်သင်၏အသူဌေးကရှိပါတယ်…
PhotoFunia v2.0.7 – APK ကို Download လုပ်ပါ
အန်းဒရွိုက်, apk, app ကို, လြှောကျလှာ, ဓါတ်ပုံပညာ, လူကြိုက်များသော Apps ကပ
PhotoFunia v2.0.7 APK ကိုဖျေါပွခကျြ PhotoFunia သင်တစ်ဦးပျော်စရာ CRAM ကျွမ်းကျင်မှုကမ်းလှမ်းတဲ့ဓာတ်ပုံကိုတိုးမြှင့်ကိရိယာ Download. သင်၏မျက်နှာကိုတစ်ဦး Billboard ပေါ်တွင်တင်, တစ်ဦးတံဆိပ်ခေါင်း, သို့မဟုတ် Pop-အနုပညာလက်ရာတစ်ခု Warhol ကဲ့သို့သောအလုပ်များတွင်. Mona Lisa ကိုတစ်ခုသို့မဟုတ်ကာယဗလမယ်ဖြစ်ထွက် Turn. သငျသညျမှထမြောက် 150 မြင်ကွင်းများ…
Poweramp Music ကို Player ကို (စမ်းသပ်ခြင်း) v2.0.4-build-467 – APK ကို Download လုပ်ပါ
Poweramp Music ကို Player ကို Download လုပ်ပါ (စမ်းသပ်ခြင်း) အန်းဒရွိုက် Poweramp များအတွက် v2.zero.four-build-467 APK ကိုဖျေါပွခကျြ Highly ထိရောက်သောဂီတ Player ကို Android.2.zero အဘို့ခိုင်ခံ့ဂီတပါဝင်သူဖြစ်ပြီးအောက်ပါအဓိကပစ်လွှတ်နှင့်အခမဲ့လူတိုင်းအဘို့ကိုအစားထိုးနေသည်, Poweramp အပြည့်အဝမော်ဒယ် Unlocker ဝယ်သူကို. ချက်ချင်းရဖို့ twitter @ Poweramp2 အပေါ်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူလိုက်နာ…
scanner ရေဒီယို v3.5.1 – APK ကို Download လုပ်ပါ
Scanner ရေဒီယို v3.5.1 APK ကိုဖျေါပွခကျြသင့်ရဲ့ဆဲလ်ဖုန်းအတွက်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှရဲနှင့်မီးဖိုဌာနများခြင်းငှါသတိပြုပါ Download. ကျော်ထံမှအသံနေထိုင်ခြင်းငှါသတိပြုပါ 2,900 ရဲနှင့်မီးဖိုစကင်နာ, ရာသီဥတုရေဒီယို, နှင့်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှလေ့လာသူရေဒီယို Repeaters (အပိုထည့်သွင်းခံရခြင်းနှင့်အတူ…
Google က Shopper v2.3 – APK ကို Download လုပ်ပါ
Google က Shopper v2.3 APK ကိုဖျေါပွခကျြအားသုံးသပ်ခြင်းကုန်သွယ် Download နှငျ့သငျ on-the-go နေအခါတိုင်းကောင်းတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုရှာဖွေတွေ့ရှိ. သင့်ရဲ့တယ်လီဖုန်းနှင့်အတူကုန်သွယ်ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်ကုန်ကျစရိတ် quick.Discover ကောင်းတဲ့ကုန်သွယ် get နှင့်သင့်မှာ Android တယ်လီဖုန်းနှင့်အတူကမ်းလှမ်း. ကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းကိုရယူပါ, ဘားကုဒ်များနှင့်မြတ်သောအအနုပညာလက်ရာများ scan ဖတ်ခြင်းဖြင့်ကုန်သွယ်သောဥစ္စာသည်ရရှိမှုနှင့်ဝေဖန်မှု, …
အန်းဒရွိုက်, apk, app ကို, လြှောကျလှာ, လူကြိုက်များသော Apps ကပ, လူမှုရေး
SKOUT Download – တှေ့ဆုံ, chat, & ပရောပရည်များအတွက် Skout မှာတစ်ခုတည်းအမျိုးသမီးများနှင့်ယောက်ျားတွေ၏ v2.8.1 APK ကိုဖျေါပွခကျြတွေ့ဆုံသန်းပေါင်းများစွာသောပရောပ, ကြားဆက်ဆံရေး, ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့်ချစ်ခြင်း! chat နှင့်အခမဲ့ဓာတ်ပုံတွေ browse! ပရောပရန် SKOUT ကိုသုံးပါ, ကစား, အခွင့်အခါ, ရက်စွဲတစ်ခုသို့မဟုတ်အသစ်အပေါင်းအသင်းရှာဖွေတွေ့ရှိ. SKOUT at ငါတို့သည်သင်တို့၏ယူ…
Sonic Soundboard v1.2 – APK ကို Download လုပ်ပါ
အချိန်ကြာမြင့်စွာတည်တံ့အားကစားကနေအကောင်းဆုံးအသံနှင့်ဂီတ၏အုပ်စုတစုလည်းပါဝင်သည်ဒါက Sonic Soundboard v1.2 APK ကိုဖျေါပွခကျြ Download,Sonic 1 အစဉ်အဆက် လုပ်. အရေးပါအထင်ကရဂိမ်းထဲကတစ်ခုအနေဖြင့်အကောင်းဆုံးအသံ၏အုပ်စုတစုလည်းပါဝင်သည်ဒါက Sonic Soundboard, Sonic အဆိုပါဖြူကောင်. Sonic အနည်းငယ် relive…
SPB တီဗီ v2.2.1 – APK ကို Download လုပ်ပါ
SPB တီဗီ v2.2.1 APK ကိုဖျေါပွခကျြ SPB တီဗီ Download – အဆိုပါ Go ကိုတွင်ဖမ်းယူနားဆင်သိမ်းဆည်းထားပါ! ၌ကျိန်းဝပ်စောငျ့ရှောကျဖို့ SPB တီဗီကိုသုံးပါနှင့်သင့်စက်အတွက်ဗီဒီယို On-demand တီဗီချန်နယ်လ်. သင်တစ်ဦး 3G သို့မဟုတ် Wi-Fi ချိတ်ဆက်အသုံးချသင့်ပါတယ်. ထက် သာ. ကြီးမြတ် 120+ လိုင်းများ. အဘယ်သူမျှမ subscription ကိုငွေပေးချေမှု! မီဒီယာအတွက် Android ကိုရေးသားသူပြဿနာဆုရှင်…
StudyDroid စာလုံးကတ် 2.0-အခမဲ့ v3.3.0 – APK ကို Download လုပ်ပါ
အန်းဒရွိုက်, apk, app ကို, လြှောကျလှာ
Download StudyDroid စာလုံးကတ် 2.0-အခမဲ့ v3.3.0 APK ကိုဖျေါပွခကျြ StudyDroid သင့်ရဲ့အိတ်ကပ်ထဲမှာသင့်လျော်သည့်စာလုံးကတ်နေရာ. လိုင်း-On သို့မဟုတ်သင့်ဆဲလ်ဖုန်းအတွက် flash ကိုကစားကတ်များ Create, ထို့နောက်သူတို့ကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်. အဘယ်သူမျှမအားဖွငျ့တခါပိုပြီးသင့်ရဲ့စာလုံးကတ်ဆုံးရှုံး. နယူး Options ကို:* 2-ထပ်တူပြုခြင်း * Card ကိုအရောင်များကိုဆိုလိုသည် * စိတ်ကြိုက် Textual အကြောင်းအရာ Dimension ကတော့ paid ကြိုးစားပါ…
TeleNav GPS စနစ် Navigator v1.0 – APK ကို Download လုပ်ပါ
TeleNav GPS စနစ် Navigator v1.0 APK ကိုဖျေါပွခကျြအသံပဲ့ထိန်း GPS စနစ် Get Download, မြေပုံ, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစာရင်းများနှင့်အမှန်တကယ်အချိန်ဧည့်သည်ယခုအပ်ဒိတ်! သင့်ရဲ့အသှငျအပွငျမှာသငျသညျနေရာအသစ်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိကူညီပေးပါမည်သောသူအပေါင်းတို့သည်နေ့ရက်သည် TeleNav GPS စနစ် Navigator ထိန်းသိမ်းပါ, ဤတည်နေရာရ, နှင့်အတူအသီးအသီးခြေလှမ်းမှာ သာ. ကြီးမြတ်ကျွမ်းကျင်မှုရှိ…
အလွန်သေးငယ်သောမျှော်စင် v1.3.6 – APK ကို Download လုပ်ပါ
အန်းဒရွိုက်, apk, app ကို, လြှောကျလှာ, မတော်တဆဖြစ်သော
Tiny မျှော်စင် v1.3.6 APK ကိုဖျေါပွခကျြတခု Tiny မျှော်စင်တည်ဆောက်မည် Download အဲဒီမှာနေထိုင်ကြောင်းကိုသင်၏ bitizens ကိုင်တွယ်! ? ? ?အဆိုပါ #1 iPhone ကိုအပန်းဖြေ Tiny မျှော်စင်ကိုပထမဦးဆုံးအချိန်များအတွက် Android ကိုကပါဝင်ပတ်သက်? ? ?အလွန်သေးငယ်သောမျှော်စင်သေးငယ်တဲ့မျှော်စင်ဆောက်လုပ်ရန်နှင့်သောကုမ္ပဏီများနှင့် bitizens ကိုင်တွယ်ရန်သင့်အားခွင့်ပြုထား…
Vocab ပုံရိပ်ယောင် SAT & Audio v1.1 – APK ကို Download လုပ်ပါ
SAT Vocab ပုံရိပ်ယောင်များ Download & Android ပေါ်မှာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ Audio v1.1 APK ကိုဖျေါပွခကျြ! iPhone ပေါ်မှာဒါဟာ 5-ကြယ်ပွင့်အထူးအသားပေး app ကိုယခုက Android ကပါဝင်ပတ်သက် (ကနဦးအဖြစ် Lite ဗားရှင်း) နှင့် 50 commonest SAT စာပိုဒ်တိုများ. ဝေါဟာရဆောယခုပျော်စရာလေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်ပါတယ်. “ကဓါတ်ပုံတွေသာအသုံးပြုသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ app ကအရမ်းအသုံးဝင်သည်…
ခေတ်မီတိုက်ခိုက်ရေး 3: ကြွေလွ Nation v1.0.1 – APK ကို Download လုပ်ပါ
အန်းဒရွိုက်, apk, app ကို, လြှောကျလှာ, Arcade နှင့်လှုပ်ရှားမှု
ခေတ်သစ်တိုက်ခိုက်ရေးသုံး Download: MediaFire.comDownload ခေတ်သစ်တိုက်ခိုက်ရေးသုံးမှတဆင့်ကြွေလွ Nation v1.0.1 APK ကို: စစ်ဆင်ရေးနေအိမ်သို့တာမျိုးတဲ့အခါမှာ MirrorCreator.com ဖျေါပွခကျြတစျဆငျ့ Nation v1.0.1 APK ကိုကြွေလွ, အားလုံးစိုးရိမ်ပူပန်စွန့်ခွာ. ပထမဆုံးအကြိမ် FOR!!! $ zero.99 မှာက Android ပေါ်မှာရှိသမျှ Gameloft ဗီဒီယိုဂိမ်း!! ခေတ်မီတိုက်ခိုက်ရေးသုံးလည်းရောင်းချမှုအပေါ်ဖွစျလိမျ့မညျ, …
voicemail vT.5.2.0.24 – APK ကို Download လုပ်ပါ
အဆိုပါ Samsung Galaxy S II ကိုများအတွက် default အနေနဲ့ Dash အသံမေးလ် utility ကိုသည်အသံမေးလ် vT.5.2.zero.24 APK ကိုဖျေါပွခကျြ Download, Epic 4G ကိုဆက်သွယ်ရန်.
Wi-Fi Finder ကို v3.2 – APK ကို Download လုပ်ပါ
Wi-Fi Finder ကို v3.2 APK ကိုဖျေါပွခကျြ Wi-Fi Finder ကိုအသီးအသီးတယ်လီဖုန်းနှင့် tablet များအတွက်အခုတော့ Android အတွက် Download!!! (တယ်လီဖုန်းဖောက်သည်: Wi-Fi ကို Finder ကို Wi-Fi ကိုဟော့စပေါ့၏ဒြပ်စင်မြင်ကွင်းကိုကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာအထွေထွေအများပြည်သူသုံး Wi-Fi ကိုတည်နေရာအမည်တစ်ခုရိုးရှင်းတဲ့ဖြေရှင်းချက်အဖြစ်ဆဲလ်ဖုန်းဗားရှင်းအပေါ်ဆဲလ်ဖုန်း name ကိုခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သည်။…
PandaApp v1.1.1 – APK ကို Download လုပ်ပါ
PandaApp v1.1.1 APK ကိုဖျေါပွခကျြ Pandaapp စမတ်ဖုန်းအမျိုးအစားအားလုံးကိုအဘို့အလုပ်ဆောင်ချက်များကို၏ကြီးမားသောပမာဏပေးသောအခမဲ့ခွဲဝေမှု App ဖြစ်ပါတယ် Download. အခုတော့ထက် သာ. ကြီးမြတ်ရှိပါတယ် 8000 အဲဒီမှာအထဲကအခမဲ့ apps ဒါမှမဟုတ်ကစားနည်းများကိုသင်ရယူနိုင်အောင်, အားလုံး overlaying4ဘုံစမတ်ဖုန်းပလက်ဖောင်း, အတူတူက iOS နှင့်အတူ, …
PandaApp v1.0 – APK ကို Download လုပ်ပါ
PandaApp v1.0 APK ကိုဖျေါပွခကျြ Pandaapp စမတ်ဖုန်းအမျိုးအစားအားလုံးကိုအဘို့ရည်ရွယ်ချက်များ၏ကြီးမားသောပမာဏကမ်းလှမ်းသောအခမဲ့ခွဲဝေမှု App ဖြစ်ပါတယ် Download. အခုတော့ထက် သာ. ကြီးမြတ်ရှိပါတယ် 8000 အခမဲ့ apps ဒါမှမဟုတ်ဂိမ်းလက်လှမ်းသင်ရယူနိုင်အောင်, အားလုံးဖုံးကွယ်ထားကြောင်း4ဘုံစမတ်ဖုန်းပလက်ဖောင်း, အတူတူက iOS နှင့်အတူ, အန်းဒရွိုက်, …
Skype ကို – အခမဲ့ video တောင်းဆို v2.6.0.95 – APK ကို Download လုပ်ပါ
အန်းဒရွိုက်, apk, app ကို, လြှောကျလှာ, ဆက်သွယ်ရေး
Skype ကို Download လုပ်ပါ – v2.6.zero.95 APK ကိုဖျေါပွခကျြတောင်းဆိုအခမဲ့ video အခမဲ့ Skype ကို-to-Skype ကိုဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှု Make, နှင့်အပြောင်းအရွှေ့အပေါ် Skype ကိုစွဲချက်မှာအမည်အားတယ်လီဖုန်း Skype ကိုအပေါ်တခြားဘယ်သူ့ကိုမှအခမဲ့အသံနှင့်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှု Make, ဖြစ်စေမ theyre တစ်ခုက Android ပေါ်မှာ, iPhone ကို, Mac အတွက်သို့မဟုတ် PC, ဖြည့်စွက်ကာ…
အန်းဒရွိုက် v1.8.1 များအတွက် Facebook က – APK ကို Download လုပ်ပါ
အန်းဒရွိုက်, apk, app ကို, လြှောကျလှာ, လူမှုရေး
Facebook က Android ကို v1.8.1 APK ကိုဖျေါပွခကျြဝေမျှမယ်များအတွက် Download နဲ့ Android App ကိုများအတွက် Facebook ကိုနှင့်သင်၏အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်အတူဆက်စပ်စောင့်ရှောက်. Android အတွက် Facebook ကသင်သွားလာရင်းပေါ်တွင်သင်၏အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်ရှယ်ယာနှင့်အတူပူးပေါင်းကူညီပေးသည်. တစ်ဦးဓာတ်ပုံရိုက် Add, သူငယ်ချင်းများ images နဲ့ရပ်တည်မှု updates များကိုအတူရေရှည်တည်တံ့, တစ်ဦးဆဲလ်ဖုန်းအရေအတွက်ကိုကြည့်ရန်, …
Google Earth ကို v6.1 – APK ကို Download လုပ်ပါ
အန်းဒရွိုက်, apk, app ကို, လြှောကျလှာ, google
Google Earth ကို v6.1 APK ကိုဖျေါပွခကျြ Google Earth နှင့်သင်၏လက်ဖဝါးကနေကမ္ဘာကြီးကိုရှာဖွေပါ Download. တစ်ဦးလက်ချောင်းများ၏ပွတ်ဆွဲနှင့်အတူကမ္ဘာဂြိုဟ်ကိုဖြတ်ပြီးပျံသန်းဖို့ Google Earth ကိုသုံးပါ. ဝေးလံသောမြေများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသို့မဟုတ်သင့်ကလေးဘဝကျိန်းဝပ်နှင့်အတူသင့်ရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် reacquaint. အသံအားဖြင့်ရှာရန်…
ယစ်မူး pee v1.0.7 – APK ကို Download လုပ်ပါ
သင်အမှန်တကယ်အရက်မူးနေသင့်ရဲ့ဆီးရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုကောင်းသောမူး pee v1.0.7 APK ကိုဖျေါပွခကျြ Download?အကောင်းဆုံးအရက်မူးဟာသအားကစား! သင့်ရဲ့ဆီးလှုပ်ရှားမှုကိုတစ်ဦးရေချိုးခန်းပန်းကန်မှရည်မှန်းချက်ရန်သင့်ဆဲလ်ဖုန်းစောင်းသော်လည်းအရက်နှင့်အရက်များကြီးမားပမာဏသောက်ရ. လွယ်ကူပြီးရိုးရှင်းတဲ့အသံရနိုင်ပါသလား, သို့သော်ထိုကိစ္စ…
Angry Birds Rio v1.4.0 – APK ကို Download လုပ်ပါ